12 Mazano Ekusiyanisa Yako Yemukati Kushambadzira | Martech Zone
Ini ndinoda chokwadi chekuti vaverengi vedu vanonamatira nesu kunyangwe isu tisinganyanye kusika zvine hunyanzvi. Kuratidzira uye kutsikisa toni ye infographics kunobatsira kusiyanisa kutsikisa kwedu kubva kune vamwe kunze uko - asi isu hatina kuenda zvakanyanya kupfuura izvo. Yedu podcast yekukurukurirana akateedzana nevatungamiriri vekutengesa kuedza kumwe chete.
Zvizhinji zvezvikonzero zvekuti isu tinonamira kune zvipfupi zvinyorwa zvemukati zvinongova kubva pakuona kwekuona. Tine toni yemisoro yekunyora nezvayo uye kwete yakawandisa zviwanikwa. Iyi infographic kubva kuOracle iri kundikurudzira kuti ndiwane zvishoma zvekugadzira, zvakadaro. Iyo infographic, 12 Inotyisa Zvemukati Kushambadzira Pfungwa (Izvo Zvisiri Blog Zvinyorwa), zvinopa mamwe matipi makuru ekusiyanisa zvemukati.
rodzafungwa - Nyora zvako zvemukati semibvunzo.
Twitter - Bvisa zvirimo mumachunks pa Twitter.
machati - Siyanisa zvemukati nezvakasiyana machati.
Case Study - Tarisa mutengi uye ugovane yenyaya yekudzidza.
Vadivelu Comedy Comic Strip - Nyora zvako zvemukati mune iri nyore kugoverwa zvemukati tambo.
Meseji Meseji - Bvunza ongororo kuburikidza neSMS uye ugovana zvabuda.
Series - Nyora yakawanda-chikamu akateedzana kuchengetedza vanhu vachidzoka.
mugove - Curate uye govana zvemukati pane yemagariro zvemukati saiti senge Pinterest.
Interviews - Shandisa fomu yekubvunzurudza uye ugovane mhinduro kubva kune nyanzvi ..
kujairika - Edza akasiyana masitaera, mbeva mbeva, uye mafomati ekudyidzana kuti ubatanidze vaverengi.
Glossary - Nyora gwaro kana girosari (uye chengeta zviripo!).
Isu tinodawo kugovana odhiyo, vhidhiyo, kuongorora preview uye machena mapepa, uye - ehe - infographics. Ndezvipi zvimwe zvemukati zvekushambadzira mazano iwe zvawaedza izvo zvakashanda nemazvo? Inzwa wakasununguka kupindura uye kugovana!
Tags: Zvidzidzo zvemhosvamachatimetiki mitsetsemazano emukatizvemukati zvekushambadzira mazanozvemukati zvakateedzanazvemukati matipiegatungamirirakubvunzurudzwaPinterestrodzafungwadzakatevedzanamugovetext messagesTwitterkujairika
Filestage: Rongedza Video Yako Annotation uye Ongororo Maitiro